खप्तड छेडेदह Archives - नागरिक रैबार
खप्तड क्षेडेदहको अध्यक्षमा एमालेका दिलबहादुर रावत र उपाध्यक्षमा काँग्रेसका विशुदेवी नाथ विजयी
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा एमालेका उम्मेदवार दिलबहाद रावत र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेवार विसुदेवी नाथ विजयी भएका छन् । एमाले उम्मेदवार रावतले कांग्रेस उम्मेदवार खड्कबहादुर बुढालाई पराजित गरेका हुन् । रावतले ३ हजार ७ सय ४७ मत पाएका छन् बुढाले ३ हजार ५ सय ५८ मत पाएका छन् । यस्तै उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेस उम्मेदवार […]
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको ताजा परिणाम यस्तो छ
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पालिका अध्यक्ष उपाअध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुको पछिल्लो मत परिणम ६ ओटा वडाको गणन सकिएको छ । भने अव वडा ७ वडाको गणना हुन बाकी रहेको छ । वडा नम्मर ६ सम्मको गणनाअनुसार को ताजा परिणाम यस्तो रहेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष ३०९८ उपा अध्यक्ष २९७२ नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष ३०५२ उपा अध्यक्ष ३१२७
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ५ मा काँग्रेसका रावत बिजयी
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पालिका वडा न ५ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार जित बहादुर रावत बिजयी भएका छन । उनको ६९९ मत आएर बिजयी भएका छन भने उनका निकटतम प्रतिदन्दी एमालेका लालबहादुर रावत ६५६ मत ल्याएर पराजित भएका छन । अध्यक्ष २७२४ उपा अध्यक्ष २६४० नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष २५८२ उपा अध्यक्ष २६१३
खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम
खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिका मतपरिणाम नेकपा एमाले अध्यक्ष २७२४ उपा अध्यक्ष २६४० नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष २५८२ उपा अध्यक्ष २६१३
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणम यस्तो छ
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा पछिल्लो मत परिणम अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष १४६३ उपा अध्यक्ष १४२९ नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष १४३५ उपा अध्यक्ष १४६२
खप्तड छेडेदह ३ मा काँग्रेसका उमेदवारकाे प्यानलनै विजयी
नागरिक रैबार/बाजुरा १ जेष्ठ। बाजुरा जिल्लाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ३ नम्मर वडामा काँग्रेसकाे प्यानलनै विजयी भएकाे छ । अध्यक्ष पदमा नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षपदका उमेदवार बिर्क बहादुर रावत ३ नम्वरकाे अध्यक्षमा विजयी भएका छन। अध्यक्ष पदमा विजयी भएका रावतले ३ सय ८१ मत प्राप्त गरेका छन ।
खप्तड छेडेदह-२ मा काँग्रेसका बुढा प्यानलसहित विजयी
नागरिक रैबार/बाजुरा १ जेष्ठ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका भक्तबहादुर बुढा विजयी भएका छन्। उनी ४९१ मतका साथ विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका गणेश शाहीले ४१४ मत प्राप्त गरेका छन्। बुढाकाे प्यानलसहित विजयी भएको बताइएको छ।
खप्तड क्षेडेदह १ को वडा अध्यक्षमा काँग्रेसका रावल विजयी
नागरिक रैबार/बाजुरा ३१ बैशाख। बाजुराका खप्तड छेडेदह–१ काँडाको वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर रावल प्यानलसहित विजयी भएका छन् । उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका दानबहादुर रोकायालाई ४१ मतले हराउँदै वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । वडा सदस्यमा पनि कांग्रेसकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । रावल २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वडाध्यक्ष विजयी भएका थिए । उनी यस पाली […]
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका अप्डेट: १ हजार मत गणना हुँदा कसको कति ?
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाकाे पछिल्लो मतपरिणाम १००३ मत गणना हुँदा काँग्रेस :अध्यक्ष: 499 उपाध्यक्ष: 503 वडा अध्यक्ष 512 एमाले : अध्यक्ष: 488 उपाध्यक्ष: 481 वडा अध्यक्ष :476
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ८ सय मत गणनाहुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष ३८७ उपा अध्यक्ष ३८० वडा अध्यक्ष ३९७ नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष ३९९ उपा अध्यक्ष ४०२ वडा अध्यक्ष ४०९ नेकपा माओबादी केन्द्र अध्यक्ष २ उपा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष
नेकपा एमाले गाउँपालिका अध्यक्ष २९८ गाउँपालिका उपाअध्यक्ष २९७ वडा अध्यक्ष २९४ नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष २९३ उपा अध्यक्ष २९५ वडा अध्यक्ष २९७
नागरिक रैबार। स्थानिय तह निर्बाचान सकिय संगै जिल्लाका नौ ओटा स्थानिय तह मध्य २ वटा स्थानीय तहको मतगणना सुरु भएको छ । सुरु भएका पालिकाहरुमा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ । त्यसै गरि बडिमालिका नगरपालिकाको मतगणना १० बजेदेखी सुरु हुने मुख्य निर्बाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताएका छन । बुढिनन्दा […]
खप्तड क्षेडेदहमा एमालेप्रति जनताको आकर्षण बढ्दो
नागरिक रैबार/बाजुरा १९ बैशाख । आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसंगै बाजुराका राजनीतिक दलहरु यतिबेला मतदातासंग भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् । विभिन्न पार्टीबाट टिकट पाएका उम्मेदवारहरु यतिखेर जनताको घरदैलोमा पुगेर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न जनतासंग अपिल गरिरहेका छन् । नेकपा एमालले पनि अहिले जिल्लाभर उम्मेदवारहरुलाई लिएर घरदैलो अभियान गरिरहेको छ । सोही क्रममा आज एमाले खप्तड […]
आगाेमा जलेर खप्तड क्षेडेदहमा एक महिलाकाे मृत्यु
नागरिक रैबार/बाजुरा १४ बैशाख जिल्लाकाे खप्त डछेडेदह गाउँपालिका २ ग्रान्जामा आगाेमा जलेर एक बृद्धाको मृत्यु भएको छ । मंगलवार साँझ ८ बजेतिर हावाहुरीले घरछानाेमा आगलागि हुँदा ७५ बर्षिय तुलेदेबि बुढाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराले जनाएको छ । आगलागी बाट एक हल गोरु, एउटा गाई, २ वटा गाईका बाच्छा र १२ वटा […]
काँग्रेस खप्तड क्षेडेदहका सभापति रावतले दिए राजीनामा
नागरिक रैबार/बाजुरा १२ बैशाख । नेपाली काँग्रेस खप्तड छेडेदह गाउँ कार्य समितिका सभापति हर्क बहादुर रावतले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी जिल्ला नेतृत्वले टिकट वितरणमा गुटगत निणर्य गरेको आरोप सहीत सभापति पदमा नबस्ने विज्ञप्ती सहीत राजीनामा दिएका हुन् । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका रावतले पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा […]
समाचार खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणम यस्तो छ
समाचार खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा मतगणना अप्डेट: कसको कति मत ?
समाचार खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ६ सय मतगणना गर्दा को अगाडी ?
समाचार खप्तड क्षेडेदहमा एमालेप्रति जनताको आकर्षण बढ्दो
Breaking News खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको ताजा परिणाम यस्तो छ